EA inotenga maCodemasters: ichachinja mitambo yeLinux? | Linux Vakapindwa muropa
EA inotenga maCodemasters: ichachinja mitambo yeLinux?
EA Yakagadzira makuru emavhidhiyo mazita emitambo, muchokwadi, ndiyo yaive yakaita yepamutemo Formula 1 mazita (2000-2002) isati yapfuura mumaoko evaCodemasters. Neshanduko kuCodemasters, F1 yasvika Linux mune mamwe marongero ayo, ayo anga achifarirwa nevazhinji vatambi vanoshandisa iyo penguin chikuva uye vanoda kutamba ino yakanaka racing racing simulator.
Kune rumwe rutivi, Codemasters Ivo zvakare vakave vagadziri vemazita makuru mukufamba kwavo kwese, seakakurumbira Colin McRae Rally. Nekudaro, ivo havana kunge vasina kushoropodzwa, sezvo mavhezheni avo ekutanga eF1 akasiya zvakanyanya kudiwa maererano nekugadzirisa, uye vashandisi vazhinji vakanyunyuta nezvazvo ... Neraki, izvo zvachinja neshanduro dzinotevera.
Ngazvive sezvazvingave, izvo isu zvatinofanira kutenda nekuda kwekuti mimwe yemitambo yemavhidhiyo iyi yakaiswawo kuLinux. Chinhu chinogona kukanganiswa nekutenga EA. Ikozvino, iyo rese catalog yemazita akagadziridzwa uye mukuvandudza kwekambani inozopfuura kuenda kuAmerican. Kutenga kwave kushamisika, sezvo maBritish airatidzika kunge akatengwa ne Tora-Vaviri, asi akazobvuma kupihwa EA.
Iko kutenga kuchapedzwa munaKurume 31, 2021, panguva iyo ichave chikamu che Electronic Arts, muridzi weEE Sports, ichave iri iyo inoitika kukudziridza iyi F1 mitambo yemavhidhiyo kana mamiriro akasachinja. Uye, pamusoro pezvo, yaizowedzera yakakosha portfolio yekutyaira simulation mazita, senge EA's Kudikanwa Kwekumhanyisa, kune iyo inofanirwa kuwedzerwa marezinesi eambotaurwa F1, Tsvina, Grid uye Project Cars.
Mubvunzo ndewokuti ... EA icharamba ichipa here mazita kuLinux, kunyatso bvumidza neFeral Inopindirana chiteshi kana iwe unenge uchizeza kuzviita? Ndinozviona zvakaoma kana vakasachinja maitiro avo, nekuti vanga vachiramba mitambo yemavhidhiyo yepuratifomu yeLinux ... asi ndinotarisira kuti ndakanganisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » EA inotenga maCodemasters: ichachinja mitambo yeLinux?
Uye tichitarisa tarisiro yeEE, kana ivo vari, uye hazviuye kwavari kuti kana mazita avo anomhanya paLinux…. Ini pachangu, ndinofunga kuti nhau idzi dzekuti "isu" dzakaipa (kunyange hazvo kuchiri kuchimbidza kuti titore mhedziso ... [Saka vanotishamisa]).